Madaxweynaha Soomaaliya oo Villa Somalia ku qaabilay Gabadhii guusha siyaasadeed kasoo hoysay Minnesota – Codkasoomaalida.com
Madaxweynaha Soomaaliya oo Villa Somalia ku qaabilay Gabadhii guusha siyaasadeed kasoo hoysay Minnesota	Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud ayaa maanta ku qaabilay xarunta madaxtooyada Soomaaliya Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee gobolka Minnesota.
Waa safarkii ugu horeeyay oo ay ku tagto caasimada Muqdisho, waxaana socdaalkeeda ku wehlinayay seygeeda, iyadoo xarunta Villa Soomaaliya uu ku soo dhaweeyay agaasimaha habmaamuuska C/raxmaan Cismaan.
Ilhaan Cumar ayaa madaxweynaha ku sugeysay dhowr daqiiqo goobtii loogu talagalay in ay kula kulanto, waxaana markii danbe labada mas’uul dhaxmaray kulan isbarasho iyo is xog wareysi ah.
Madaxweyne Xassan Sheekh ayaa uga mahad celiyay Ilhaan Cumar booqashada ay ku timid dalkeeda hooyo, waxaana socdaalkeeda uu imanaya xili Soomaaliya ay isku diyaarineyso doorashada hogaanka cusub ee dowlada sanadkan 2016ka.
Madaxweynaha, ayaa sheegay in dalka ay ka socdaan doorashooyinkii Qaran oo gabo-gabo ku dhow, sidaa darteedna ay bulshada xog wareysi la yeelato si ay u ogaato dedaalka dowladdu sameysay, iyadoo kaashaneysa shacabka Soomaaliyeed oo dhan afartii sanno ee la soo dhaafey.
Dhinaca kale, Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in boqashadan tahay mid si gaar muhiim ugu ah, iyo in ay kulan la yeelato madaxweyne Xassan Sheekh, waxaana ay soo dhaweysay qoondada 30% ee baarlamaanka laga siiyay haweenka Soomaaliya.
Ugu danbeyntii, Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed ayaa ka guuleystay Phyllis Kahn oo ah haweeeneydii xisbiga Dimuquraadiga u mataleysay golaha wakiilada ee gobalka iyo Max’uud Nuur oo ah Soomali tartanka kula jiray.
Author adminPosted on December 20, 2016Categories WARARKA	Post navigation
Previous Previous post: Dagaal khasaare geystay oo ka dhacay Jubbada HooseNext Next post: Farmajo lands in Mogadishu; greeted by thousands of supporters